navoaka tamin’ny fomba ofisialy ireo zatovolahy miisa 175 nahazo ny fihofanana ara-miaramila
Nataon’ny zoma, faha 18 septambra 2015 lasa teo ny famoahanana ireo tanora lahy ka antoko taona 2015 andihany voalohany izay miisa 175, ireto navoaka ireto izay niatrika fihofanana ara-miaramila nandritra ny 3 volana. Araka izany niavaka ny fampihofanana tamin’ity taona ity satria natambatra ny fihofanana ny avy ao rezimanta voalohany ny faritanin’ny miaramila faha-3 sy ny avy ao amin’ny rezimanta faha-roa G�nie miaramila eto Toamasina ity. Natao izao mba hampitovy ny lenta ny fihofanana azon’ireo tanora niatrika ny fihofananana.
Tonga nanome voninahitra izao lanonam-pamoahana izao ny Prefet de province de Toamasina, ny lehiben’ny faritra Atsinanana, ny solombavambahoaka voafidy teto Toamasina ary ireo olo-manankaja sy olon-tsotra sivily sy miaramila. Tamin’ireo lahateny izay nataon’ny lehiben’ny komandin’ny miaramila roa tonta dia samy nanafatra momba ny fitiavan-tanindrazana avokoa izy ireo. Teo ihany koa no nanambarana ampabemaso fa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fianakaviambe ny tafika izy ireo. Araka ny fantatra dia misy amin’izy ireo no hiverin’ny ao amin’ny fiaraha monina hanohy ny asa fampandrosoana fa misy kosa ny anohy hatrany ny asa maha miaramila azy ireo. mbola hisy ihany koa anefa ny fanazarantena izay ataon’izy ireo mandritra ny roa taona aorian’izao famoahana azy 175 lahy izao.
(111) PrudHomme R. : 19-09-2015 - 11:08